နိုင်စွမ်း - နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် ပန်းချီဆရာ သမ္မတများ (၂) - MoeMaKa Media
Home / Article / Literature / Naing Swan / နိုင်စွမ်း - နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် ပန်းချီဆရာ သမ္မတများ (၂)
Article, Literature, Naing Swan
နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် ပန်းချီဆရာ သမ္မတများ (၂)
မေ ၄၊ ၂၀၂၁
“ပန်းပျိုးလက်နဲ့ သံသတ္တုတူးသူ” လို့ ဝိသေသပြုရမယ့် အမေရိကန် နိုင်ငံရဲ့ ၃၄ ဦးမြောက် သမ္မတ ဒွိုက်‌ဒေးဗစ် အိုက်ဇင်ဟောင်းဝါး (Dwight D. Eisenhower) ဟာ ပန်းချီကားပေါင်း အနည်းဆုံး ၂၅၀ ကျော်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ပန်းချီဆရာပါ။ သူ့ကို ၁၈၉၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်နေ့က တက္ကဆပ်ပြည်နယ်၊ ဒနီဆန်မှာ မွေးဖွားပါတယ်။ မိဘတွေက ဒေးဗစ်ဂျက်ကော့ဘ်နဲ့ အိုင်ဒါအဲလိဇဘတ် အိုင်စင်ဟောင်ဝါတို့ ဖြစ်ပြီး သူ့မှာ အစ်ကို ၁ ယောက်နဲ့ ညီ ၂ ယောက်ရှိပါတယ်။
သူဟာ ကန်းဆက်စ်ပြည်နယ် အဘီလီနီအရပ်ရှိ လယ်ယာလုပ်ငန်းမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ပြီး အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးနောက် ဝက်စ်ပွိုင့် စစ်တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ပြီး နောက် စစ်မှုထမ်းခဲ့။ ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်း စစ်မှု ထမ်းကောင်းတံဆိပ် ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရ။ မာမီ (Mamie) နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့။ ၁၉၂၈ ခုနှစ်မှာ ကြည်းတပ်စစ်တက္ကသိုလ်သို့ ဆက်လက်တက်ရောက်ပြီးနောက် ၁၉၃၅-၁၉၃၉ အတွင်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဒေါက်ကလပ် မက်ခ်အာသာရဲ့ စစ်ဦးစီးအဖွဲ့မှာ အမှုထမ်းခဲ့။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ၁၉၄၁ ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်မှူးချုပ် ရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ခံရ၊ ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် ဥရောပ အမေရိကန် လက်နက်ကိုင်တပ်များရဲ့ တပ်မှူးကြီး ဖြစ်လာ၊ ၁၉၄၄၊ ဇွန်၊ ၆ ရက်နေ့မှာ ဆင်နွှဲတဲ့ “နော်မန်ဒီကမ်းတက်တိုက်ပွဲ” ကို ဆက်လက်ဦးစီးကွပ်ကဲ၊ ၁၉၄၃ ခုနှစ်မှာ မဟာမိတ်နိုင်ငံခြားတပ်ပေါင်းစုရဲ့ အကြီးအကဲ တပ်မှူးချုပ်ဖြစ်လာ၊ အဲဒီနှစ် ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀ ရက်နေ့မှာ အမေရိကန် ကြည်းတပ်မတော်မှာ ကြယ်လေးပွင့်အဆင့် ဗိုလ် ချုပ်ကြီး အဖြစ် အစမ်းခန့်အပ်တာဝန်ပေးခံရပြီး ၁၉၄၆ မှာ ထိုရာထူးမှာ အမြဲခန့်အပ်ခံရ။
၁၉၄၅ ခုနှစ် မေ ၇ ရက်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ နာဇီဂျာမနီတို့ လက်နက်ချပွဲအခမ်းအနားကို မဟာမိတ်များ၏ ကိုယ်စား လှယ်အဖြစ် တက်ရောက်၊ အမေရိကန် စစ်ဦးစီးချုပ် အဖြစ် (၁၉၄၅-၁၉၄၈) အတွင်း တာဝန်ထမ်းရွက်ခဲ့၊ စစ်အတွင်း ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်များကို Crusade in Europe အမည်နဲ့ ၁၉၄၈ မှာစာအုပ်ရေးသားထုတ်ဝေရာ အရောင်းရဆုံးစာအုပ်စာရင်းဝင်ခဲ့၊ ၁၉၄၈တွင် ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ရဲ့ အဓိပတိ၊ ၁၉၅၀ မှာ နေတိုးစစ်မဟာ မိတ်အဖွဲ့ရဲ့ ဦးစီးချုပ် စသဖြင့် ထမ်းဆောင်ခဲ့။ တပ်မှထွက်ပြီးနောက် ရီပါပလီကန်ပါတီဝင်ဖြစ်လာ၊ ၁၉၅၂ ခုနှစ်မှာ သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်ခြင်းခံရ။
အိုင်ဇင်ဟောင်းဝါးဟာ နိုင်ငံရေးအယူအဆတွေမှာ လွတ်လပ်မှုရှိ ပြီး စီးပွားရေးမှာလည်း လွတ်လပ်သည့်ဈေး ကွက်စနစ်ကို လက်ခံယုံကြည်သူပါ။ စစ်ရေးတွင်လည်း တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးပျံများကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဟာ သူ့ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာရေးရာများမှာလည်း တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပြီး ကိုရီးယားစစ်ပွဲအဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့သလို အရှေ့တောင်အာရှစစ်ရေး မဟာမိတ်အဖွဲ့ (ဆီးတိုး) ကိုအခိုင် အမာထောက်ခံသူပါ။ သမ္မတရာထူးမှ အနားယူပြီးနောက် ၁၉၆၉ မတ်လ၊ ၂၈ ရက်နေ့မှာ နှလုံးရောဂါနဲ့ ဝါရှင်တန် ဒီစီမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
“နေပါဦးကွ...၊ သူ့ကို ဘာကြောင့် ‘ပန်းပျိုးလက်နဲ့ သံသတ္တုတူးသူ’ လို့ ဝိသေသပြုရတာလဲ စွမ်းကြီး?”
“သူ့ရဲ့ အမည် အပြည့်အစုံက Dwight David "Ike" Eisenhower ဖြစ်ပြီး သူ့ကို ချစ်စနိုးနဲ့ အလယ်စကားလုံး “အစ်ကီ” လို့ ခေါ်ကြတယ်။ အဲဒီ Ike ဆိုတာက ဂျပန်ပန်းအလှစိုက်ပညာ Ikebana နဲ့ တွဲဆက်နေတယ်လေ။ ပြီးတော့ Eisenhower ဆိုတာကလည်း ဂျာမန်စကားလုံး "Eisenhauer" နဲ့ ဆက်စပ်နေပြီး အဓိပ္ပာယ်က "Iron Miner" (သံသတ္တုတူးဖော်သူ) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီလို ညွှန်းပြုလိုက်ရတာပဲ”
“ကောင်းပါ့ကွာ... ကောင်းပါ့။ သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တခြား သိမှတ်စရာတွေ ပြောပါဦး”
“သူ စစ်တပ်မှာ တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ သူ သမ္မတ ဖြစ်လာတဲ့တဲ့ သူနဲ့ သူ့ဇနီးမာမီတို့မှာ ကိုယ်ပိုင်အိမ်ရယ် လို့ မရှိခဲ့ ဘူး တဲ့။ သူဟာ စာလည်းရေး ပန်းချီလည်းဆွဲတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်ဦးပေါ့။ သူနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ နာမည်ကျော် အင်္ဂလန် ဝန်ကြီးချုပ် ဝင်စတန်ချာချီကလည်း နိုင်ငံရေးသမား၊ ပန်းချီဆရာတစ်ဦးပါ”
“မြန်မာနိုင်ငံကို လွတ်လပ်ရေး ပေးဖို့ စောလွန်းနေသေးတယ် လို့ ပြောခဲ့တဲ့ ချာချီ မဟုတ်လား။ အဲဒီတုန်းက စာနယ်ဇင်းတွေ က ‘ဝင်စတန့် လျာရှည်’ လို့ ရှုတ်ချခဲ့တယ်လေ။ အစ်ကီ အကြောင်း ဆက်ပြောပါဦး”
“အိုင်ဇင်ဟောင်းဝါးကို လေးစားစရာကောင်းတဲ့ အချက် ၃ ချက်ပြောချင်တယ်။ ပထမအချက်က စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆိုပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင်အိမ် မဝယ်နိုင်ခဲ့ အဖြစ်ပဲ။ ဒုတိယ အချက်က သူ့ရဲ့ မှတ်သားစရာ ဆိုရိုးပြု စကားတွေ ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးအချက်က အနုပညာအပေါ် ထားတဲ့ စိတ်ဓာတ်ပါ”
“သူ့ရဲ့ ဆိုရိုးစကားတွေ အကြောင်း အရင်ဆုံး ပြောပြကွာ"
“သူ့ဆိုစကားတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီထဲက လတ်တလော အနေအထားနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတဲ့ ၅ ခုကို ထုတ်နုတ်ပြမယ်။ ဗမာလိုတော့ ဘာသာပြန်မနေတော့ပါဘူး”
၁။ When you put onauniform, there are certain inhibitions that you accept.
၂။ There's no tragedy in life like the death ofachild. Things never get back to the way they were.
၃။ Any man who wants to be president is either an egomaniac or crazy.
၄။ Never wasteaminute thinking about people you don't like.
၅။ We are going to have peace even if we have to fight for it.
“ဟေ့ကောင်ရေ... သူ့ရဲ့ အနုပညာအပေါ် သဘောထားလည်း ပြောဦး စွမ်းကြီး”
“အိုင်ဇင်ဟောင်းဝါးဟာ သူ့အနုပညာ ဖန်တီးမှုပတ်သက်ပြီး အမြဲတမ်း နှိမ်ချတတ်သူ ဖြစ်ပြီး သူ့ပန်းချီကားတွေကိုလည်း “daubs” (ခပ်ညံ့ညံ့လက်ရာ) လို့ ပြောလေ့ရှိသူပါ။ သူဟာ ၁၉၆၇ ခုနှစ်က နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ Hartford Museum ပြတိုက်ကို သူ့ရဲ့ ပန်းချီပြပွဲ တစ်ခု အတွက် ရောက်လာတယ်။ ပြပွဲသတင်းနဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှု အကြောင်း ချဉ်းကပ်မေးမြန်း လေ့လာပြီး ရေးသားတင်ဆက်မယ့်သူက ရစ်ချတ်ကိုဟင် (Richard Cohen) ပါ။ ကိုဟင်ကို ပန်းချီကားတွေ ရေးဆွဲဖန်တီးမှု က နှစ်လိုဖွယ် ဆွဲဆောင်နေပေမဲ့ ချီးပညွှန်းဆိုရေးသားဖို့ နောက်တွန့်နေတယ်။ ဒါနဲ့ အိုက်ဇင်ဟောင်းဝါးရဲ့ ပန်းချီကားတစ်ခု ပြပြီ ပန်းချီကားထဲက သင်္ကေတပြု ရေးဆွဲပုံအကြောင်း မေးတယ်။ အိုင်ဇင်ဟောင်းဝါးက - “ကိုဟင်ရေ... ဒီနေရာမှာတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အမှန်အတိုင်း ပြောဖို့ လိုမယ်ဗျ။ တကယ်လို့သာ ကျုပ်ဟာ သမ္မတ မဖြစ်ခဲ့ဘူး ဆိုရင် ဒီဟာတွေကို မီးရှို့ပစ်ကြမှာ ကြပြီ” လို့ ပြန်ဖြေတယ်”
“ဟာ... ဟုတ်လား၊ Eisenhower certainly wasn’t typical sensitive artist. ပဲ။ တို့ဆီက ဆရာတွေလို လုံးဝ ဆတ်ဆတ်ထိ မခံ အနုပညာရှင် မဟုတ်ဘူးနော်”
ဧပြီ ၂၉၊ ၂၀၂၁
(ညနေ ၃ နာရီ ၅၄)
နိုင်စွမ်း - နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် ပန်းချီဆရာ သမ္မတများ (၂) Reviewed by k on 11:29 AM Rating: 5